ရန်ကုန်စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ မေးခွန်းထုတ်ဖွယ် မဲဆွယ်အသုံးစရိတ်
ရဲမွန် နှင့် ဆုမြတ်မွန် ရေးသားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မကြာသေးမီနှစ်တွေမှာ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ်က လူထုလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေသူများ
Sea Lion ၏ Distribution Solutions Centre ကို ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၌ ဖွင့်လှစ်
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းတန်ဖိုးရှိ Distribution Solutions Centre (DSC) ကို မတ် ၂၅ ရက်နေ့တွင် Sea Lion Group က ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၊ ကျန်စစ်သားစက်မှုဇုန်တွင်တည်ရှိသည့် အဆိုပါစင်တာသည် ၆,၈၇၀ စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းပြီး မြေဧက ၈.
ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦး၏ အယူခံကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်သို့ တင်ပြထား
တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် မတက်ရောက်နိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် ယမန်နေ့ညနေပိုင်း ရုံးဆင်းချိန်တွင် “လှေကားအဆင်း၌ ခြေချော်ပြီး” ဒူးအရွတ် အနည်းငယ်ထိခိုက်ခဲ့သည် ဟု ဆိုသည်
မြန်မာ ယူ-၂၃ က ဂျပန်ကို ၇ ဂိုးပြတ်ဖြင့် ရှုံးနိမ့်ပြီး အုပ်စု ဒုတိယသာရရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် အာရှ ယူ-၂၃ ချန်ပီယံရှစ် ခြေစစ်ပွဲ (AFC U23 CHAMPIONSHIP QUALIFIERS 2020) ၏ အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ် မြန်မာ ယူ-၂၃ အသင်းနှင့် ဂျပန် ယူ-၂၃ အသင်းတို့ ရန်ကုန်မြို့တွင် ယနေ့ညနေပိုင်းက ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာ မြန်မာက ၇-၀ ဂိုးဖြင့်.
Tom Sanders ရေးသားသည်။